Global Voices teny Malagasy » Mahavariana ireo mpandinika sy ny mpakafy ny vorona ny Spiny Babbler, ilay vorona tsy hita afa-tsy ao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2019 6:56 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Liva Andriamanantena
Na dia mihoatra ny 800 aza ny karazam-borona hita any Nepal dia ny Spiny Babbler  ( Turdoides nipalensis ) no hany vorona tsy hita afa-sy ao amin'ity firenena ity. Miaina any anaty kirihitr'ala matevina ilay vorona somary miloko volondavenona sy volon-tsôkôla , antsoina hoe Kaande Bhyakur amin'ny Nepaley ary tazana mora kokoa amin'ny haavo 500 metatra ka hatramin'ny 2.135 metatra. Mandrahona ity karazam-borona Spiny Babbler tsy manam-paharoa izay tena ankafizina ity ny fahasimban'ny tontolo iainana na dia nahavariana ny mpandinika ny vorona eto amin'izao tontolo izao nandritra ny taona maro aza ity vorona ity.
Nilaza ny boky The Status of Nepal’s Birds: The National Red List Series  (Ny mombamomba ireo vorona any Nepal, ny andiana lisitra mena nasionaly) hoe:
Nahaliana ireo mpandinika ny vorona sy ireo mpankafy vorona manerana izao tontolo izao ny Spiny Babbler, izay tsy hita afatsy any Nepal. Nosoratan'i  Don Messerschmidt ny fitantaran'i S. Dillon Ripley ilay mpandinika momba ny vorona ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Mikaroka Spiny Babbler  :
Tahaka izany ihany koa, nandany taona maro  niezaka nitady sy naka sary an'ity vorona ity ilay ambasadaoro Amerikana teo aloha tany Nepal, Scott DeLisi .
Tandindonin-doza  ilay vorona noho ny fanalana ny kirihitr'ala hanaovana fambolena sy ny fanitarana ny faritra an-tanàndehibe. Tandindonin-doza amin'ny fihazana izy ireo matetika any ivelan'ny faritra voaaro, ary nahitana fihenana ny isan'ny Spiny Babbler any amin'ireo havoana manodidina ny Lohasahan'i Kathmandu. Mety hiteraka fahasimbana vaovao hafa anefa ny tsy fisian'ny toerana izay manimba ny fonenan'ny Spiny Babbler any amin'ny faritra sasany. Vao foronina ny faritra feno kirihitra izay antsoin'izy ireo hoe fonenana satria mitohy miha-manify ny ala noho ny fitrandrahana ala manerana ny firenena. Saingy ny fotoana ihany no hilaza izay hoavin'ity hany vorona tsy manan-tsahala avy ao Nepal ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/28/134561/
 Mikaroka Spiny Babbler: https://www.pilgrimsonlineshop.com/5289-search-for-the-spiny-babbler-an-adventure-in-nepal.html
 nandany taona maro: http://archive.nepalitimes.com/news.php?id=19388#.XE8vN2lS_IV